'သင်ဖတ်သမျှအားလုံးကိုမယုံပါနှင့်': DENNIS MCNENNIS သည်သန့်ရှင်းစွာလာပြီးသူသည် SWITCH SHITTER မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည် - သတင်း
'သင်ဖတ်သမျှအားလုံးကိုမယုံပါနှင့်': Dennis McNennis သည်သန့်ရှင်းစွာလာပြီးသူသည် Switch Shitter မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်
ဆောက်သမ်တန်၏အကြိုက်ဆုံးညဥ့်ကလပ်ဖြစ်သူ Switch သည်ပြီးခဲ့သည့်လက TQD's set တွင်တစ်စုံတစ် ဦး ကကပွဲကြမ်း၌မိမိကိုယ်ကို shit လုပ်သည်ဟုသတင်းပေးပို့ပြီးနောက်၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်လကကျော်ကြားခဲ့သည်။
Dennis McNennis အမည်ရှိသူတစ် ဦး ဦး သည်ထိုနေ့ညတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာများကိုဝန်ခံခဲ့ပြီးနံနက်စောစောတွင် Dennis McNennis အမည်ရှိသူ၏ Facebook တွင်သူ၏ Facebook တွင်တင်ခဲ့သည်။
ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုသူ့အားကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီးအလွန်ကြီးမားသွားခဲ့သည်။ ကလပ်တစ်ခုတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းနှင့်ကခုန်ကြမ်းပြင်ကိုစွန့်ခွာခြင်းသာမကဘဲဇာတ်လမ်းကိုပြောပြရန်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်မည့်သူများအားလူ ၅၀,၀၀၀ ကျော်ထံရောက်ရှိစေခဲ့သည် လောကီနိုင်ငံကိုပြောလော့။
အဖြစ်အပျက်၏ညတွင် Dennis ကပေးပို့ခဲ့သည့် WhatsApp ၏မက်ဆေ့ခ်ျများကိုပေးပို့ခြင်းနှင့်ဒဲနစ္စအားမိမိကိုယ်ကိုဖုန်းဖြင့်စကားပြောခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်းထိုအဖြစ်အပျက်သည်ယခင်ကယုံကြည်ထားခြင်းထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းကြောင်းမကြာမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာအားလုံးမုသားဖြစ်ခဲ့သည်ထွက်လှည့်။
တစ်စုံတစ် ဦး က tinder ပေါ်တက်လာမယ့်စောင့်ရှောက်လျှင်
အခြားရက်သတ္တပတ်၌သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က 'ငါ Dennis McNennis နဲ့မနေ့ညကတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ဒီဇာတ်လမ်းကပုံပြင်မဟုတ်ဘူး' 'ဟုပြောခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုပြောဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာ 'ဇာတ်လမ်းကွယ်လွန်သွားတာကိုမမြင်ချင်တဲ့အတွက်'
ကျွန်ုပ်သည်ဤ (အောက်) ၏အောက်ခြေကိုရောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သူငယ်ချင်းများ၊ အပြန်အလှန်မိတ်ဆွေများနှင့်ဆောက်သမ်တန်ကျောင်းသားများမှဒင်နစ်၏ရုပ်ပုံနှင့်အဝေးမှကြည့်ရှုသူမည်သူမဆိုကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။ နောက်ဆုံးတော့သူ့ကိုရှာတွေ့သူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးသူ၏အမည်မှာ Harry Norris ဖြစ်သည်။
အလှည့်ရောက်တော့ဟယ်ရီနှင့်အခြားတီထွင်ကြံဆနိုင်သည့်ယောက်ျားလေးသုံး ဦး သည် Switch Shitter ၏ဇာတ်လမ်းကိုတွေ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီး 'Dennis McNennis' အမည်ဖြင့်ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်အတုတွင်ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်အတုတင်ခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကဗိုင်းရပ်စ်နဲ့သွားခဲ့ပြီးသူတို့ကကျွန်တော်တို့အားလုံးမှန်မှန်ကန်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုလက်ခံယုံကြည်စေရုံသာမကတကယ့် Switch Shitter ကိုလည်းအဆုံးမဲ့အရှက်ကွဲခြင်းမှကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယောက်ျားလေးများနှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံစဉ်၊ ကျွန်ုပ်သိရမည့်ပထမ ဦး ဆုံးအရာမှာ Dennis McNennis ပရိုဖိုင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဇွန်လကတည်းကတက်ကြွခဲ့သနည်း။ သူတို့ကဒီနောက်ပြောင်မှုကိုဆွဲထုတ်ဖို့အမြဲစီစဉ်ထားတာလား။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြတာလား၊ မယုံနိုင်စရာဖြစ်အောင်သင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာတင်ထားတဲ့ပရိုဖိုင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းလား။ လုံးဝမဟုတ်ပါ - သူတို့၏တုန့်ပြန်မှုသည် 'ကြာရှည်စွာပင်မွေးဖွားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်တည်း' သာဖြစ်သည်။
ငါထင်သည်၊ သူတို့ဟာသူတို့ဟာတကယ့် Switch Shitter ကိုသိကြပြီ၊ ဒါမှမဟုတ်ညမှာဖြစ်ရပ်ကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးဒီဟာကရှက်စရာကောင်းပြီးလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာမည်ဟုခန့်မှန်းကာသူတို့၏သူရဲကောင်းဖြစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
နောက်တဖန်ငါမှား - ယောက်ျားလေးများ Flava D ကို (TQD အဖွဲ့ဝင်သုံး ဦး အနက်မှတစ် ဦး) မှသူမ၏အဖြစ်အပျက်ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကမိမိကိုယ်ကို shit လုပ်ခဲ့သောပန်ကာတစ်ခုမှတွစ်တာတစ်ခုမှတုန့်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်သူတို့သည်တွစ်တာတွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့ခဲ့ရကြောင်းယောက်ျားလေးများကရှင်းပြခဲ့သည် ယောက်ျားလေးလေးယောက်သည် 'အတွင်းပြက်လုံး' အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်။ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုဖန်တီးရန်၊ အွန်လိုင်းတွင်စုစုပေါင်းရုပ်ပုံကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဒဲနစ်စ်ဟုထင်မြင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
- FLAVA D (@FlavaD) အောက်တိုဘာလ 4, 2018
မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုထွက်လျက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
သူတို့ကသူတို့ဟာ Bing မှာဒီပုံကိုတွေ့ခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ 'ဂူဂဲလ်မှာဘာမှမကောင်းမွန်ဘူး' (ဆိုလိုသည်မှာ) ။ သူတို့က 'ငါးစာမဖြစ်ဖို့သေချာအောင်' နည်းနည်းချလိုက်တယ်။ ထို့နောက်သူတို့ကညစာစားရန်ညံ့ဖျင်းသော Sainsbury ၏ညစာစားပွဲကိုစားခဲ့သည့်မိုက်မဲသောလတ်ဆတ်သောပုံပြင်တစ်ပုဒ်နှင့်အတူထွက်လာကြသည်။ နောက်တွင်ဗော့ဒ်ကာနှင့် Pro Plus အလွန်များပြားလာပြီးအားလုံးသည်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သောကိစ္စဖြစ်သည်။
'ဒန်းနစ်' ကကျွန်တော့်ကိုဇာတ်လမ်းအကြောင်းပြောပြနေချိန်မှာငါဖုန်းပြောပြီးသတင်းအချက်အလက်တွေများနိုင်သမျှများများရခဲ့တယ်။ ယောက်ျားလေးလေးယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကဒဲနစ္စလို့ဟန်ဆောင်ပြီးဖုန်းကိုဖြေပြီးပြောတယ် ကောင်းတယ် ထိုညတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုအတိအကျအသေးစိတ်ဖော်ပြပါ - အစာအိမ်နာခြင်း၊ သူ၏ခြေထောက်ပေါ်ရှိ“ စိုစွတ်သောခံစားချက်” နှင့် 'ငါအစဉ်အမြဲငါခံစားဖူးသမျှအဆိုးဆုံးသောအနံ့' ဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာမှာသူသည်ရယ်မောခြင်းမပြုတော့ပါ။
ဤအရာအလုံးစုံအလွန်ယုံကြည်သလိုပဲ။ အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အိမ်ထောင်ဖက်ကိုသူပြောတဲ့စကားတွေကိုကြည့်ဖို့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ surelyကန်အမှန် တစ်ယောက်ယောက်ကိုသွားပြောမယ်။ ငါမက်ဆေ့ခ်ျကိုစလှေတျခဲ့သည့်နေ့စွဲနှင့်အချိန်သက်သေပြချင်တယ်, သူတို့ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြတာလဲ။ ငါဒီကိုတကယ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ရှင်းပြချက်ကိုမျှော်လင့်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့က '' ငါတို့တစ်ယောက်က Google ကိုဘယ်လို WhatsApp ချက်တင်စကားပြောအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေခဲ့တယ် '' လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ အဲဒါကအရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ငါဖြစ်ကောင်းကြောင်းလာမယ့်မြင်ကြင့်သင့်ပါတယ်။
လူအများစုကနိုက်ကလပ်တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၀ တ်နေသည့်ကျပန်းလူတစ် ဦး ကိုဂရုစိုက်လိမ့်မည်ဟုမည်သူမျှမျှော်လင့်မထားခဲ့ပါ။ အထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးများမဟုတ်ပါ။ သူတို့ကဒီဇာတ်လမ်းကဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တော့မယ်လို့သူတို့ထင်သလားလို့ငါမေးတဲ့အခါသူတို့ကငါ့ကိုမုန်းတီးကြပြီးသူတို့ဘယ်လောက်ကြီးမားသွားပြီဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။
ဒီဇာတ်လမ်းကိုလူဘယ်နှစ်ယောက်ဖတ်ပြီးပြီလဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုငါအတိအကျပြန်ပြောခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့တုန့်ပြန်မှုကတော့ 'Fuck၊ ဒါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲ၊ ငါတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါက CV ကိုသွားနေတယ် ''
ဒန်းနစ်စ်၏စာမျက်နှာပေါ်ရှိပရိုဖိုင်းပုံသည်ဟယ်ရီ၏ပုံဟောင်းဖြစ်သဖြင့်ညတွင်သူ့ကိုလူအနည်းငယ်ကအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်ဟုသူကပြောသည်။ Soton ကျောင်းသားများသည်ဒင်းနစ်အားပရိသတ်ကြီးများဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဒဏ္legာရီဟုခေါ်တွင်သည်၊ သူ့ကိုဖက်ကာဓာတ်ပုံများမေးကြသည် - ဟယ်ရီက 'ငါထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုနဲ့တူတယ်' ဟုဝန်ခံခဲ့သည်
ထို့နောက်ယောက်ျားလေးများသည်အပြည့်အဝအားယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Oceana နှင့် Jesters တွင် Dennis McNennis အားကြွေးကြော်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ DJs တွေကသူတို့ဘယ်သူတွေပြောနေတယ်ဆိုတာချက်ချင်းသိတယ်။ Jesters ကြွေးကြော်သံမှာ DJ က 'ငါ့ကြမ်းပြင်မှာမထိတ်လန့်ကြနဲ့' လို့လည်းပြောခဲ့တယ်။
အဆိုပါယောက်ျားလေးများပျော်စရာဆက်ပြောသည်။ ဆောက်သမ်တန်မှဒန်းနစ်စ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာပေါ်ရှိကျပန်းလူများကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာများပြားလာပြီး 'ဘယ်သူလဲ တကယ် ဒင်းနစ်ကမက်နနစ်လား?
နောက်ဆုံးမှာသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Insta စာမျက်နှာတစ်ခုသို့ Dennis အကြောင်းမေးသည့်ကျပန်းလူတစ်ယောက်ဆီမှစာတစ်စောင်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒီအချက်ကနေသူတို့ဟာဇာတ်လမ်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လာပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ကကျွန်တော့်ကို Dennis McNennis ဟာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးအတုအကောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီက Thomas Noms အမည်ရှိနောက်ထပ်အကောင့်အတုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပျင်းနေသောကျောင်းသားများ၊ အချိန်ကုန်လွန်ရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။ ဝမ်းနည်းစရာကတော့ Thomas Noms ဟာတူညီတဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုကိုမရခဲ့ပါဘူး။
သို့သျောလညျးအကြီးအရာအလုံးစုံသုံးခုလာ - ဒီလာမည့်နှစ်တွင်လာမယ့်တတိယနှင့်နောက်ဆုံးစီးရီးရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုပါသလား?
ဟယ်ရီက 'ကောင်းပြီ၊ အခုဒန်းနစ်စ်ကိုရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်အောင်သူဖုံးအုပ်ထားရလိမ့်မယ်။ နာမည်အသစ်အောက်မှာဘယ်သူသိနိုင်မှာလဲ။ ဇာတ်လမ်းရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားက - မင်းကလေးတွေကိုဖတ်တာကိုမယုံနဲ့ '
ကျွန်တော်တို့ဟာနာရီဝက်လောက်စကားပြောနေခဲ့ကြတာပါ။ ကောင်လေးတွေကဒီကိရိယာကိုဘယ်လိုဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးတွေအားလုံးကိုပြောပြခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခု မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်၌လိုအပ်သောအရာအားလုံးရှိခဲ့သည်။ ဒဲနစ္စမက်နက်နစ်ကိုအမြဲတမ်းမဖော်ထုတ်မီသူသည်စာဖတ်သူများအားစွန့်ခွာလိုသောစကားလုံးများရှိသလား။
tik tok ကျော်ကြားလာပုံ
သူရဲကောင်းတကယ့် Switch ကိုတကယ့် Shitter အတွက်ကြိုဆိုပါတယ်။